Faroole: Dowladda FS ayaa dayacday danjire Bari-bari – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Madaxweynihii hore ee maamulka Puntland, Cabdiraxmaan Maxamed Faroole ayaa cambaareeyey weerarkii labo maalmood ka hor Al-shabaab ku qaaddey hoteelka Maka Al-mukarrama ee magaalada Muqdisho, kaasoo ay ku dhinteen ilaa 14 ruux.
Farole oo ku sugan dalka Australia ayaa weerarkaas ku tilmaamey fal waxashnimo ah lidna ku ah bini aadamnimada, wuxuuna tacsi u direy ehelada dadkii weerarkaas ku dhintey.
Wuxuu Faroole si gaar ah ugu tacsiyeeyey qoyskii iyo qaraabadii uu ka tegey Danjire Yuusuf Maxamed Ismaaciil Bari-Bari, oo ahaa daniraha Xafiiska Xuquuqul Insaakna Qaramada Midoobay u fadhiyey Soomaaliya.
Faroole ayaa ku eedeeyey dowladda Soomaaliya iney dayacdey ammaanka Danjire Bari-Bari islamarkaana ay qayb ku yeelaneyso mas’uuliyadda dilkiisa, sida uu hadalka u dhigay.
“Mas’uuliyadda waxaa iska leh dowladda Federaalka, ninkaas safiirka ah ammaankiisa in si gaar ah loo ilaaliyo ayey ahayd ma ahan inuu dadka caadiga ah iska dhex dego, waan ku dhaliilayaa dowladda taas” ayuu yiri Faroole.
Alshabaab ayaa galabtii Jimcaha weerar ku qaaday hotelka Maka Almukarrama, waxeyna hotelka ka dagaalamayeen muddo ka badan 15 saacadood oo xiriir ah.